Amakhasino eSweden Amakhasino - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino Aku-inthanethi
Esimweni lapho uthwebula khona amakilabhu wokugembula waseSweden online, ngaleso sikhathi ukhona endaweni efanele, lapha ungabona futhi usebenzise ukucwaninga okungcono kakhulu kwamaqembu wokugembula online Sweden. Ukubheja eSweden kuyaziwa kusukela emahoreni amaViking, kukhona nezinganekwane mayelana nokuxazulula imibuzo yendawo ngemidlalo yamathambo. Ngo-1934 ingqalasizinda yokuvimbela ukubheja kombuso yakhelwa ukulwa nokubheja okungekho emthethweni. Njengoba iklabhu eku-inthanethi libonakala emfanekisweni, abantu abaningi bathanda ukugembula ku-inthanethi manje futhi iSweden ingelinye lamazwe aphezulu amaqembu e-inthanethi okugembula abhekiswe kuwo. Abadlali bangabheka ngaphezulu kweklabhu enkulu online futhi babe nemiklomelo emikhulu yesitolo sokuqala eqhathaniswa nezizwe ezahlukahlukene. Iklabhu laseSweden livelele ngempela ku-2019 njengoba umthetho wokubheja unzima futhi kumane kungamakilabhu amahle kakhulu okugembula athola imvume yokusebenza eSweden, ngale ndlela abadlali bavikeleke ngokweqile futhi bangadlala kumakilabhu amahle kakhulu okugembula. Isiphathimandla Sokugembula saseSweden besilokhu sinikeza ithuba lokuqinisekisa ukuba semthethweni, ukuphepha kanye nekhwalithi engantengantengi yeklabhu yaseSweden eku-inthanethi kanye nomkhakha webhizinisi lokubheja.
Kusukela ekuqaleni kwendawo yokuqala ye-2019, abadlali abavela eSweden bangaba nenketho yokudlala ezindaweni ezigunyaziwe futhi bazothola umvuzo omnandi, njengoba ngemuva kwalokho amaklabhu okugembula angeke avunyelwe ukuthi anikeze abadlali imivuzo eminingi njengoba benzile phambilini. Amabhonasi ekhasino waseSweden Iklabhu enkulu ye-online esezingeni eliphakeme izohlala inamandla emakethe yaseSweden futhi ngokufanayo kuzoba nemikhiqizo ethile emisha eyenzelwe kuphela abadlali abavela eSweden. Ama-AboutSlots azokhombisa ukugqekezwa kweklabhu ehamba phambili kwi-inthanethi enemvume yaseSweden ngakho-ke abadlali bazoba nenketho yokubona irundown bajoyine amakilabhu okugembula agunyaziwe. Ilayisense entsha yaseSweden Casinos izothuthukisa nje ukubandakanyeka kwabadlali neklabhu ye-inthanethi, ibenze babe nomqondo wokuphepha futhi badlale ngokuphepha eziklabhini zokugembula ezigunyaziwe. Lo mhlahlandlela omusha ngokufanayo uzokwehlisa ngokuphelele ukwazisa nokukhangisa kwemidlalo yeqembu kubathengi kanye nokubheja okuthembekile yinto ezothuthukiswa njengoba imvume entsha idinga ukuthi wonke amakilabhu okugembula anikeze abaphathi lapho abadlali bengabeka khona izindawo zokuvalelwa kwabo ngempumelelo nangokuphumelelayo. Njengaphambi kwenkombandlela entsha, abadlali njengamanje bazoba ne 0 ukuhlolwa kokuhoxiswa kwabo kanye nemivuzo. Umthetho omusha wokubheja uzonika amandla iklabhu ukuthi ize futhi isebenze ivela eSweden ngomsebenzi we-18% kuzo zonke izinzuzo abazenza ngaphakathi kwezinhlangano. Ukwazi kahle ukuthi yiliphi inani lekilabhu ye-inthanethi ezoba amalayisense kunzima kakhulu ukusho, noma kunjalo, le mvume izoba nzima futhi iqhubeke kancane ukuthola lokho emazweni ahlukile. Izicelo zemvume entsha yokubheja yaseSweden zavulwa ngoJuni 2018 yize yonke into ithola izicelo ezintsha ngokungaguquki, ngakho-ke noma ngabe sazi amanani acacisiwe ekilabhu egunyaziwe namuhla, lokhu kungashintsha isonto ngalinye kuvumela amakilabhu amasha wokugembula ukungena emakethe ephethwe. Ngaphandle kwemvume entsha yomdlalo waseSweden kuzobe kungasemthethweni ukuhola iklabhu emakethe yaseSweden ngemuva kokuthi umthetho usebenza ngasekuqaleni kwe2019. Ngemvume entsha yaseSweden, kuzoba nezidingo eziningi ezinhle kakhulu ezivela emakilabhini wokugembula online. Enye yezidingo zokuqala ukuthi yonke imidlalo kumele ibe nokuphepha kwamakhasimende okuqinile okunamaphuzu okuqeda iminyaka kanye nezinye izindlela zokubeka ngokushesha imingcele yesitolo noma ukuhlaba umkhosi okubulala irekhodi. Amakilabhu okugembula agunyazwe abaseSweden azomane anikeze abadlali umvuzo owamukelekile esitolo sabo sokuqala, ngemuva kwalokho umdlali ngeke abe nenketho yokuthola okunikezwayo okwengeziwe. Lokhu mhlawumbe kunguquko enkulu kunazo zonke ezoba nomthelela kubadlali, njengoba imivuzo ibiyindlela yokwakha izingqinamba zomdlali wokuwina, nokho ngaphezu kwalokho exhunywe ngokuqinile ezindabeni ezandisiwe zokubheja. Ngaphandle kwalokhu, ngeke kube nomehluko omkhulu kusuka ekutheni amakilabhu wokugembula waseSweden asebenza kanjani ngaphansi komthetho wokubheka umthetho omusha.
I-95 mahhala ayikho ibhonasi yephoyisithi ku-Hey Casino
I-35 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Casino ye-Bingo
I-170 i-spin bonus ayikho e-PrimeFortune Casino
I-40 yamahhala i-casino ku-OkScratchcards iCasino
I-95 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Devilfish Casino
I-175 yamahhala e-MyJackpot Casino
I-130 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Noir Casino
I-80 ayikho ibhonasi yediphozithi eBertil Casino
I-165 ayikho ibhonasi yediphozi ku-Kaboo Casino
I-35 ayikho ibhonasi yediphozi eBohemia Casino
I-145 yamahhala e-TonyBet Casino
I-45 yamahhala i-spin bonus ku-Spectra Casino
I-150 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-Hello Casino
I-80 yamahhala e-SekaBet Casino
I-15 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-PrimeSlots Casino
I-130 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit e-Zona Casino
I-80 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit e-ReelIssland Casino
I-120 yamahhala i-spin bonus ku-SuomiAutomaatti Casino
I-170 ayikho ibhonasi yokufaka idiphozi e-Sun Palace Casino
I-35 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Svea Casino
I-20 yamahhala e-spin casino lapha LAPHA Casino
I-100 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-888ladies Casino
I-105 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit ku-SpilleAutomater Casino
I-145 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-7Red Casino